China inoraswa donje tauro Kugadzira uye Fekitori | Lonovae
Inoraswa donje tauro rinotanga shanduko yechakachena kumeso panzvimbo yetsika nzira. Iyo yakapfava yemuviri wedu uye inogona kudzokororwa uye chengetedza zviwanikwa.
Inoraswa Chiso Chakapfava donje Towel inyanzvi yekugadzira. Izvo zvakakwana kugadzirisa kunetseka kune yechinyakare tauro cuase mukushanya. Uye zviri nyore uye zvehutsanana.
Isu tinonyorova uye takaomesa vaviri vanoshandisa donje tauro riri nani pane vamwe. Haina hutema hutema painenge ichipisa uye haina fluerscent hupfu. Chii chimwe, chakakora.
Production zita Inoraswa donje tauro ； Inoraswa kumeso pukuta
Mutsara （pateni Maparera, EF mutsetse, Murazvo, Mwoyo, Plain
Kureba pc imwe neimwe 20-22cm
Upamhi imwe neimwe pc 20-22cm
Huwandu hwese roll 100pcs
Gsm yega yega roll Zvingangoita mazana mana g
Zvishandiso Cotton ； Isina kurukwa
Kushandisa Kuchenesa kumeso
Kushanda Kuchengetwa kwemusha kana indasitiri yerunako
Disposable matauro ekumeso anoraswa zvigadzirwa zvekuchenesa, zvakagadzirwa nekotoni fiber, yakapfava magadzirirwo, kuomarara, uye isina-chinhu. Maitiro ekushandisa akasiyana, senge kugeza kumeso, kupukuta kumeso, kubvisa poda, kukwesha, nezvimwewo. Ine hutsanana uye yekuchenesa mhedzisiro.
Disposable kumeso matauro akapatsanurwa kuita maviri masitayera: roll mhando uye inobviswa mhando. Kune matatu marudzi: pearl pateni, yakanaka mesh pateni, uye yakajeka pateni. Mhando dzakasiyana dzakakodzera mhando dzakasiyana dzeganda.
Iyo zvakare inogona kushandiswa zvakare kuchenesa chimwe chinhu kunze mushure mekugeza kumeso.
Isu tinonyorova uye takaomesa vaviri vanoshandisa donje tauro riri nani pane vamwe. Haina hutema hutema painenge ichipisa uye haina fluerscent hupfu. Chii chimwe, chakanyanya.
Anorasirwa machira emeso akagadzirwa nekotoni mbishi zvinhu, zvine hunhu hweasina kupinza, akasimba emvura kuburitswa, akasimba kuchinjika, uye kusimba kwakanaka Ine mikana isingaenzaniswi yematauro. Imba yekugezera yakanyorova uye yakasviba, uye tauro iri nyore kupfuya mabhakitiriya uye uturu hunogona kukonzera kurwara kweganda uye acne. Iyo inogona kuraswa kumeso tauro ine nguva pfupi yekushandisa, ine ganda-inoshamwaridzika, yakapfava uye yakachena, uye zviri nyore kutakura parwendo. Uchishandisa yakanyanya tembiricha yekudzivirira maitiro, hapana kemikari yekuwedzera yakachengeteka uye yakachena.
Uye isu tinogadzira nharaunda-inoshamwaridzika inogadzira isina yakarukwa machira zvigadzirwa muna 2019 senge inoraswa donje tauro, tafura jira nezvimwe. Chinangwa chedu ndechekuunza ruzivo rwekunzwa kwehutano, hutsanana uye kugadzikana kwekuchinja kwekuchengetwa kwepamba uye hunhu.
Pashure: PP Manyowa Kubvisa Mabhandi
Zvadaro: Disposable Kicheni Kuchenesa Towel